Xildhibaan is Casilay “Baarlamaanka Ummada uma shaqeeyo, waa Goob Fadhi-ku-Dirir”. – idalenews.com
Xildhibaan is Casilay “Baarlamaanka Ummada uma shaqeeyo, waa Goob Fadhi-ku-Dirir”.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka F. Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in uu iska casilay Xubinimadiisii Baarlamaanka, Sababo la xariira Isbadel la’aanta Xaaladda dalka.
Maxamed Cabdullaahi Xirsi (Qorax), ayaa sheegay in Shaqada uu uga tagay , kadib markii uu sheegay in aanay wali dalka ka dhicin is bedelkii uu filayay mar hore oo ahaaa in loo adeego Ummada Soomaaliyeed, balse taasi aysan dhicin.
Xildhibaankan is casilay oo ka soo jeeda degmada Beledxaawo ee gobolka Gedo, ayaa u sheegay BBC-in uu iska casilay Xilkii Xildhibaanimo sidoo kalena uu dib ugu celiyay Kursigan Odayaashii Dhaqanka Beeshiisa ee markii hore isaga soo doortay.
“Haddii laga soo gudbay Xilligii KMG ahayd, loona gudbay Dowladda Rasmi ah waxaa la rabay in Isbadal Muuqda lala yimaado, oo Shacabka dhiban wax loo qabto, balse taasi ma muuqato, waana mida igu kaliftay inaan Xilkeyga iska casilo” ayuu yiri Maxamed Cabdullaahi Xirsi (Qorax).
Sababaha kale, ee uu isku casilay Maxamed Cabdullaahi Xirsi (Qorax) ayuu ku sheegay in ay tahay Isku-dhignaan la’aan dhigmin mushaarka ay qaataan iyo howsha ay qabtaan Xildhibaanada oo gaaraysa $ 4,000 USD, taasi oo uu ku tilmaamay in ay Xaq-Darro tahay, marka loo fiiriyo Miisaaniyadda DFS oo gaaraysa $218,450,743 ( Labo Boqol iyo Toban iyo Sideed Malyin, Afar Boqol iyo Konton Kun, Todobo Boqol iyo Afartan iyo Saddex Doolar).
Miisaaniyadda 2014 oo ka saraysa tii 2013 90%, ayaan jirin Meel muuqata oo lagu bixiyo, sababtoo ah Askariga Dagaalka ku jira Mushaar Lagama siiyo, Shacabkana looguma adeego haddii ay ahaan lahayd Caafimaad iyo Waxbarasho.
Baarlamaanka, ayaa lagu tilmaamay in uu yahay Fadhi-ku-Dirir, waxaana Shaqadiisu noqotay Mooshin keenis oo kaliya si Lacago Laaluush ah ugu gataan Codadkooda.
Waa Xildhibaankii 2-aad oo Is casila Sanadkan Gudihiisa, waxaana Xeer hoosaadka u yaalla dowladda uu dhigayaa in Xildhibaankii is casila ama geeriyooda lagu bedelo Booskiisa Shaqsi kale oo ku Beel ah.
Idale News Online, Baladxaawo.
Kenya: “Ciidamadeena kalama baxayno Soomaaliya”.